Surimi के हो र यो के बनेको छ? | बेजिया
Emilio गार्सिया | 13/01/2022 15:03 | अद्यावधिक गरियो 14/01/2022 09:41 | पाक कला, घर
खाद्य उद्योगले हाम्रो आहारलाई हरेक तरिकाले समृद्ध बनाउने खानाहरू प्रस्ताव गर्न निरन्तर प्रयास गर्छ। सुपरमार्केट शेल्फहरूमा आकर्षक नयाँ उत्पादनहरू छन्, केही अन्य अक्षांशहरूबाट। उदाहरण को लागी, सोया, quinoa वा surimi तिनीहरूले हाम्रो उत्कृष्ट भूमध्य आहार तिनीहरूको स्वस्थ गुणहरूको साथ पूरक छन्। यी र अन्य खानाहरू पत्ता लगाउन र तिनीहरूलाई हाम्रो दिनचर्यामा समावेश गर्न सक्षम हुनुले हाम्रो मेनुलाई पोषक तत्वहरूको सन्दर्भमा थप विविध र सन्तुलित बनाउँछ। स्टोभको गर्मीमा केहि प्रश्नहरू जन्मिएका छन् जसको सबै वैधता छ: Surimi के हो र यो के बनेको छ?
1 surimi के हो
2 सुरिमी को गुण
3 सुरिमी र प्रोटीन
surimi के हो
सामान्यतया, हामी नयाँ स्वादहरू प्रयास गर्न अधिक र अधिक खुला छौं। अर्कोतर्फ, थोरै उपभोक्ताहरू अझै पनि आफूले खाने खानाका फाइदाहरूबारे अनभिज्ञ छन्। यी कारणहरूका लागि, जब नयाँ उत्पादन जन्मन्छ र अधिक र अधिक देखिने हुन्छ, प्रश्नहरू प्राय: यसको पोषण गुणहरूको बारेमा उठ्छन्। केही दशकदेखि हामीसँगै रहे पनि प्रश्न surimi के हो अझै खुला छ। धेरै मानिसहरूको लागि यो पहिले नै एक सामान्य उत्पादन हो, हाम्रो रूपमा समुद्री खाना साल्पिकोन वा बास्क ग्यास्ट्रोनोमीको स्वादिष्ट पिन्चोहरू जस्तै भाँडामा देखिने। अरूको लागि, यो एक उत्पादन हो जुन परम्परागत स्पेनिश खानाको विशिष्ट सामग्रीको विपरित यसको नवीनताको लागि बाहिर खडा रहन्छ।
हाम्रो ग्यास्ट्रोनोमिक संस्कृतिमा मान्चेगो चीज वा इबेरियन ह्यामको रूपमा, सुरिमी हाम्रो संसारको अर्को छेउमा एक परम्परागत उत्पादन हो। यसको पुर्खाको उत्पत्ति समय मा लंगर छ, जब यो माछा को संरक्षण को एक तरिका को रूप मा देखा पर्यो। यसको नामको ध्वनि गुणहरूले संकेत गरेझैं यसको उत्पत्ति जापानमा भएको हो, लगभग एक हजार वर्ष पहिले र यसको शब्दको अर्थ हो "माछाको टुक्रा"। यस कारणले गर्दा, उदाउँदो सूर्यको देशमा सुरिमी भनेको के हो भनेर सोच्नु बेकारको कुरा हो, जसरी यो भरिएको कमर वा तरकारीको स्ट्युमा ससेजको साथ गर्नु हाम्रो लागि हो। तथ्य यो हो कि सुरीमी दैनिक आधारभूत जापानी व्यञ्जनहरू जस्तै उडोन वा सुशीमा उपस्थित छ।
सुरिमी को गुण
सुरिमी के हो भन्ने रहस्यलाई पूर्णतया सफा गर्न, महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न बाँकी छ। सुरिमी १२ औं शताब्दीमा सिर्जना भएको हो, यो स्पष्ट छ कि खाना, यसको विधि र प्रविधि धेरै विकसित भएको छ। विशेष गरी पछिल्लो शताब्दीमा, कारीगर उत्पादनले थप परिष्कृत विस्तारहरू र मार्गहरू दिएको छ सबै स्वच्छता ग्यारेन्टी संग। यद्यपि सुरिमी विस्तार प्रविधि उस्तै रहन्छ लगभग 10 शताब्दी पछि। गुणस्तर सुरिमी प्राप्त गर्न, यो प्रयोग गर्न आवश्यक छ धेरै ताजा माछा र उहाँबाट, सबै भन्दा राम्रो छान्नुहोस्: उसको स्टेक। यसको लागि सबैभन्दा राम्रो प्रजाति मध्ये एक अलास्का पोलक हो, जसको कम्मर एक पटक यसको प्रोटिन प्राप्त गर्न सफा गरिन्छ। सुरिमी भनेको के हो भन्ने जवाफ दिँदा यी पक्षहरू जान्नु ठूलो चासोको विषय हो। फाइदा उठाएर ताजा माछा कम्मर, सुरिमी ए राम्रो विकल्प उहाँ जस्तै यो खानामा, यसको फाइदाहरू छन्.
केहि वा लगभग केहि परिवर्तन भएको छैन, त्यसपछि, यो खानामा। हामी "लगभग" भन्छौं किनभने यो बनाइएको परिस्थितिले त्यसो गरेको छ। यस अर्थमा, मा जस्तै एक सुरीमी
Krissia® प्रोटिनको उच्चतम गुणस्तर र ताजापन प्राप्त गर्न जहिले पनि कम तापक्रममा बनाइन्छ। यद्यपि, कुनै पनि उत्पादन किन्नु अघि पोषण जानकारी पढ्न सधैं उपयोगी छ। यसरी, Krissia® सुरिमी बारहरू संरक्षक वा कृत्रिम रंगहरू समावेश नगर्नुहोस् त्यसैले तिनीहरूले खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टीको रूपमा पाश्चराइजेशन रोज्छन्। यो विधि दूध र दही जस्ता आधारभूत खानाहरूमा पाइन्छ हामीलाई सधैं हाम्रो फ्रिजमा सुरिमी हातमा राख्न अनुमति दिन्छ.
सुरिमी र प्रोटीन
माछाको उत्कृष्ट भागबाट बनेको सुरिमीमा प्रचुर मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ सबै आवश्यक एमिनो एसिडहरू समावेश गर्नुहोस् र तिनीहरूको लागि बाहिर खडा सजिलो आत्मसात र पाचन.
पोषण विज्ञहरूका अनुसार माछाको सिफारिसको मात्रा बीचमा हुन्छ प्रति हप्ता3र4सर्भर। यसको प्रत्यक्ष विकल्प नभई तर यसको स्वस्थ विकल्प हो, सुरिमी उपभोग गर्नुहोस् दैनिक प्रोटिनको मात्रा बढाउन मद्दत गर्छ र यसको अन्य समान महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू छन्। द सुरिमी बारहरू पनि समावेश गर्दछ ओमेगा 3, राम्रो हृदय स्वास्थ्य को लागी केहि आवश्यक polyunsaturated फैटी एसिड र भिटामिन B12, केवल पशु मूल को खाना मा उपस्थित छ, र यसले थकान र थकान कम गर्न मद्दत गर्छ। मा उपस्थित अन्य तत्वहरू सुरिमी बारहरू के हो खनिज जस्तै सेलेनियम, हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली को उचित कार्य को लागी महत्वपूर्ण।
तसर्थ, यदि तपाइँ राम्रोसँग खान मनपर्छ र तपाइँको आहारको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने, सुरिमी तपाइँको भाँडाहरु लाई पूरा गर्न र समृद्ध गर्न को लागी एक महान सहयोगी हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » Surimi के हो र यो के बनेको छ?